Global Voices teny Malagasy » Mientanentana Izahay Amin’ilay Endrika Vaovao—Antenainay Fa Tahaka Izany Koa Ianareo · Global Voices teny Malagasy » Print
Mientanentana Izahay Amin'ilay Endrika Vaovao—Antenainay Fa Tahaka Izany Koa Ianareo
Voadika ny 25 Mey 2014 22:08 GMT 1	 · Mpanoratra Ivan Sigal Nandika Andriamifidisoa Zo
Sary avy amin'ny Arsiva Monisipalin'i Seattle – CC BY 2.0
Arahaba Ry Tontolo,
Raha eo am-pamakiana ny habaky ny Global Voices ity ianao, dia mety hahatsikaritra fa misy endrika vitsivitsy niova kely izy izany. Tao anatin'ny enimbolana izahay, vahoakan'ny Global Voices, no efa niasa hanome endrika hafa indray ny habaka, ary ravon-kafaliana izahay amin'ny famoahana azy.
Miova haingana dia haingana ny hakanton'ny Internet — sady mampitaintaina no manaitaitra ny fomba fieritreretana indray ny endrika sy ny fiasan'ny habaka web iray.
Kinendrin'ity kinova vaovaon'ny habaka ity ny hanatsorana kokoa ny kirakiran'ny mpisera—tsy fanovana endrika manontolo izy ity na fanovana ny rafitra iray manontolo. Tanjonay ny hanomezana boka aman'endrika sady maoderina no tsotra, mifantoka amin'ny fanamoràna ny fitetezana sy fahitana tantara.
Amin'ity endrika Global Voices vaovao sy nohatsaraina ity dia mbola ahitanao ireo tantara sy mpanoratra mahafinaritra hatrany, fa ho mora kokoa ny fitetezana ny votoaty avoakanay, sy mamakivaky ireo zorontany izay tsy mpivoaka matetika any amin'ny fampahalalam-baovao be mpanaraka.
Hahamarika ihany koa ianareo fa narafitray indray ny pejymiresaka momba ny fikambananay sy ny iraka ataony, handraisana ireo fiovana sy fanovana nitranga tao anatin'ny folo (!) taona nihodikodinana teto izay.
Mamaly tsara amin'ny finday ilay endrika vaovao, noho izany dia afa-misitraka azy amin'ny fitaovan-tserasera rehetra anananao ianao! Pikantsary avy amin'ny iPhone.
Ny endrika amam-bikan'ny habaka vaovao dia nosainin'ilay mpanaingo Douglas Savage, sy nataon'ilay kingalahin'ny teknolojia ato amin'ny fikambanana ato aminay antsoina hoe Jeremy Clarke. Nandritra ny fotoana nanaovana ny fanandramana, dia tsara vintana izahay niasa niaraka tamin'ny Oniversiten'i Washington antsoina hoe School of Interaction Design , izay ankasitrahanay tanteraka noho ny nanaovany ny raharaha ho maimai-poana tanteraka. Vondrona telo tsy mifandray no nanao ny fanandramana sy ny fitsapana ilay habaka vaovao, ka nanome ny domberina maventy taminay manondro izay maneha tsara sy izay mila fanatsarana.
Araka ny fantatsika rehetra, tsy midika hoe lavorary ny hoe vaovao sy mamirapiratra: mbola andalam-pananganana ilay Global Voices vaovao sy nohatsaraina, mbola hanohy ny fitsapana (test) izahay, hanitsy sy hampifanaraka azy ho araka ny fizotran'ny domberina (feedback) azonay aorian'ny fivoahany, sy araka ny filàn'ny ekipam-panoratana sy ny fikambanana ihany koa.
Raha mahita fahadisoana na olana ianareo, miangavy ampafantaro anay izany amin'ny alalan'ny famenoana ity taratasy fenoina ity , na manorata amin'ny webmaster@globalvoicesonline.org . Ary raha mbola manana anareo izahay, miangavy mba hevero ihany koa ny manohana anay amin'ny alalan'ny fanolorana fanomezana .
Manantena izahay fa ho ankafizinareo ny Global Voices vaovao sy nohatsaraina!
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/05/26/60077/
 School of Interaction Design: http://www.hcde.washington.edu/
 ity taratasy fenoina ity: https://docs.google.com/forms/d/1dxyq38AE7hjgGibR3hsdG59NATsRBpyp5nyeSC63Vwo/viewform